Australia Haweeney Somali oo Taksiile ahayd oo laga mamnuucay wadista gaadiidka - SHABAKADDA WARBAAHINTA GEESGUUD | SHABAKADDA WARBAAHINTA GEESGUUD
Australia Haweeney Somali oo Taksiile ahayd oo laga mamnuucay wadista gaadiidka
Wargeyska The Herald Sun ee ka soo baxa dalka Australia ayaa qoray in Haweeneyda Soomaalida oo lagu magacaabo Xaawo Add oo 69 jir ah laga mamnuucay Dareewalnimadda, kadib, markii lagu helay qaladaad badan oo Waddo-marista iyo cabasho ka timid Macaamiisha.
Haweeneydaasi oo ahayd Dareewal Taksiyadda ka dhex shaqeeya magaalladda Melbourne ee dalkaasi ayaa la sheegay inay laga mamnuucay wadista gaadiidka, iyadoo lagu eedeeyey inay Rakaab Indhoole ah weydiisay inuu u tilmaamo jihooyinka, iyo iyadoo aan wax tixgelin ah siinin Samafalayaasha Waddooyinka, gaar ahaan Nalalka Casaanka (Red Lights) iyo inay diiday inay lacag kaash ah qaadato, iyadoo Rkaabka weydiisata Lacagaha Karaarka Amaahda ee credit cards.
Wargeyska waxa kale oo uu qoray inay Haweeneyda Soomaalida dhowr jeer la qabtay iyadoo Taksiga si xawli ah u waday iyo iyadoo loo diiwaan geliyey 27 jeer oo xad-gudub dhanka Taraafikadda iyo inay diiday inay isticmaasho Nidaamka Jiheeyaha Dayax-gacmeedka ee Internetka ku xiran ee loo yaqaano Global Positioning System (GPS), kaasi oo lagu ogaanayo halka uu qofku ku sugan yahay.
Tan iyo markii ay Haweeneyda Soomaalida oo lagu magacaabo Xaawo Add bilowday Dareewalnimadda Taksiyadda sannadkii 2004-tii, waxaa la sheegay inay rakaabkii raacay Taksigeeda ay buuxiyeen 21 dacwado caadi ah oo iyada ka dhan ah.
Rakaabka waxay sheegeen inay Xaawo Add aqoon ku filan u lahayn Waddooyinka magaalladda Melbourne iyo inay diiday inay caawiso Rakaab aad u nugul iyo Shandadiisa iyo inay Rakaab Indhoole ah ka codsatay inuu eego Nambaradda Waddoyinka.
Ma aha markii ugu horreysay ee Xaawo Add laga joojiyo wadista Taksiyadda, iyadoo markii ugu horreysy laga joojiyey sannadkii 2013-kii, waxaana lagu khasbay inay qaadato Koorsadda wadista Taksiyadda (Taxi driving course) iyo Koorsada kale ee Adeegga Macaamiisha (A customer service course).